musha / zvishongedzo / Faucet accessories / WOWOW Kicheni Faucet Sprayer Misoro G1 / 2 Chibatanidza
Iyo Sprayer ine hunhu hwekuora, kukwenya uye kushatisa immune, inogona kushandiswa kwenguva yakareba. Yakakwana yeresitorendi, yekutandarira, uye yekushandiswa kwekuvandudza dzimba.
Cherechedza usati watenga:Uyu musoro wepombi 5001 CHETE cheG1 / 2 Chinobatanidza (MALE) (Inenge 2 cm kana 0.8 inches), Kwete NPT, Kwete yepasirese
CHINOKOSHA ZVAKAWANDA: Iyo kicheni faucet musoro unotsiva wakagadzirwa neinjiniya-giredhi epurasitiki (ABS) uye Neoperl aerator yakavakwa, inogona kushandiswa kwenguva yakareba panguva yekushandiswa kwezuva nezuva, iyo brushed nickel kupera inopesana nengura uye hapana zvigunwe zvemunwe zvakasara.
3 BASA REMODZO: Rwizi rwakadzikama rwemvura rwunopa kutsetseka & kupfava kuyerera, hapana kupaza; pfapfaidzo mvura inogona kuchenesa muriwo kana michero ine hunyoro, anti-splatter kuyerera pasina kukuvara; aqua blade mvura modhi / kutsvaira blade modhi inogona kutsvaira masinki ako nyore uye nekukurumidza nesimba rakasimba.
ZVINOKOSHA KUCHENESA:Iyo yemhando yepamusoro yeABS aerator inogona kusunungurwa nyore nyore nemari yesimbi, isina mvura yakaoma uye chiyero, inochengetedza iyo yekushandisa hupenyu uye mvura chiyero
Garandi, Customer RUBATSIRO: 2-gore garandi uye rutsigiro rwevatengi runopihwa. Yakafukidzwa nemazuva makumi mapfumbamwe emahara ekudzoka.
Kuvimbika kunosimbiswa kuburikidza neyakavakirwa neNzira dzevinyl yakasimba, ichipedzisa pane ino penya uye inopenya Brushed Nickel kupera
Yakagadzika dhizaini - yakasimba dura rekuvaka inopa kuvimbika kuita uchishandisa Brushed Nickel pedzisa kumira ngura kana ngura.
SKU: 5001 Categories: zvishongedzo, Faucet accessories Tags: Pfira Hosi, Mwaya kamwene, pombi